Iyo Inonyanya Kubudirira B2B Yemukati Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Takagovana 2015 B2B Yemukati Yekushambadzira Mabhenji, maBhajeti uye Maitiro pamwe ne inonyanya kufarirwa zvemukati zvekushambadzira nzira inoshandiswa nevatengesi veB2B. Asi ndedzipi nzira dzinoshanda kwazvo dzeB2B dzekutengesa?
Zvinoenderana nekudzidza, chakavanzika chekushambadzira zvemukati kubudirira ndechekunyora yako yemukati zano uye nekuomerera pairi. Zvakare zvakafumura kuti vatengesi vezvinhu vari kugadzira zvimwe zvirimo asi ivo vachiri kunetseka kutevedzera ROI, kunyanya kana vasinganyoronge zano ravo. Unogona verenga mushumo uzere kune zvese zvakatsanangurwa zvakawanikwa. Francois Matheiu, Uberflip
Zvimwe zvezvakakosha zvatino bvumirana nazvo uye zvatiri kuona nevatengi vedu:
Infographic kushandiswa kwakawedzera zvakanyanya. DK New Media ine akawanda akaburitswa uye akati wandei pasi pekuvandudzwa kwevatengi vedu.
Zviitiko-zvemunhu zvinoshanda zvinoshamisa, zvakabuditswa newebhusaiti nemavhidhiyo.
LinkedIn inoenderera mberi iri sosi inoshanda kwazvo yekushandisa vezvenhau.
Kuumba, kubudisa uye tambo kushanda kwekushambadzira zvemukati kunoramba kuri matambudziko epamusoro.
Tags: b2b mablogb2b nyaya dzedzidzob2b zvemukati infographicb2b zvemukati zvekushambadzirab2b zviitikob2b infographicb2b mavhidhiyo ekutengesab2b midhiya enhaub2b mavhidhiyob2b webcastb2b webinarsContent Marketinguberflip
Nov 7, 2014 pa10: 03AM
Kutenda nekugovana Uberflip's infographic, zvinogara zvichinakidza kuratidzwa Kushambadzira TechBlog!